‘सुश्री सम्पत्ती’मा हट प्रियंका::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
बिहिबार, चैत्र ८, २०७४ | Thursday 22nd March 2018
काठमाडौँ – नायिका प्रियंका कार्कीको चलचित्र ‘सुश्री सम्पत्ती’मा कस्तो भूमिका होला भन्ने कौतहुलता चलचित्रको घोषणा कार्यक्रमदेखि नै भैरहेको छ । निर्माणपक्षले चलचित्रमा प्रियंका विशेष भूमिकामा रहेको बताएको थियो ।
तर, चलचित्रको एक गीतको छायांकनसँगै प्रियंकाको भूमिका खुलेको छ । चलचित्रमा उनको एउटा आइटम गीत र केहि दृश्य भएको वुझिएको छ । पोखराको एक डिस्कोमा चलचित्रमा समावेश ‘झुम्की’ बोलको आइटम गीतको छायांकन गरिएको छ । सुरेश अधिकारीको शब्द तथा संगीतमा तयार भएको यो गीतमा मिना निरौला र राजन इशानको स्वर छ ।
सुव्रतराज आचार्यले यो चलचित्रको निर्देशन गरिरहेका छन् । चलचित्रलाई पूर्ण रुपमा कमेडी कथामा निर्माण गरिने बताइएको छ । चलचित्रमा सलोन बस्नेत, प्रमोद अग्रहरि, राजाराम पौडेल, सारा लगायतका कलाकारको अभिनय छ । रमेश त्वयनाले यो चलचित्रको निर्माण गरिरहेका छन् ।
‘निर्देशकले मेरो भित्री अंग हेर्न चाहन्थे’
‘एक बर्षमा बिहे गर्छु, सविनसँग नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन’: अनु शाह
किम फरक शैलीमा फोटोसेसन
बहुचर्चित गायक रामजी खांणले दिए ३ करोड नेपालिलाई नयां वर्षको शुभकामना [ भिडियोसहित ]
प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो भ्रमण भारत ! नाकाबन्दीबाट कमाएको राष्ट्रवादले हावा खान सक्ने !
सशस्त्रमा अाइजी प्रकरण : एआइजी खनालले दिए नेविसघंका अध्यक्षलार्इ सशस्त्रकाे चालक
सभापति देउवाले दिएको यति ठुलो पद बालकृष्ण खाणद्वारा अस्वीकार, अब के होला ?
फोरम सरकारमा जानेकुरा हल्लामा मात्र सिमित !
कक्षा ८ मा पढ्ने छात्रालाई बलात्कार गर्ने प्रधानाध्यापकलाई कालोमोसो !
अन्ततः रातारात भयो प्रधानमन्त्री ओली र भारतबीच यस्तो सहमति, भारतको शरणमा जान ओली तयार !